Amaseva azinikezele: ungayikhetha kanjani efanele icala lakho elithile | Kusuka kuLinux
Amaseva azinikezele: ungayikhetha kanjani efanele icala lakho elithile
Isaka | | Okunye
I-Intanethi, njengoba uyazi, nayo yonke leyo webhu yamakhasi ewebhu nezinsizakalo, akuyona into ethereal. Kuyinto ebambekayo futhi iyatholakala isingathwe kumaseva. Futhi, njengoba nje ubungeke ushiye into eyigugu noma yikuphi, akufanele unganaki lapho ubamba khona ipulatifomu yakho yewebhu. Ngakho-ke, kufanele wazi amaseva azinikele kakhulu laphaya.
Kuningi abahlinzeki be-server abazinikele, ngobuningi bezinsizakalo namanani ahlukile. Lokho kwenza ukukhetha kube nzima, ngakho-ke kufanele wazi yonke imininingwane ukuze ukwazi ukukhetha okungcono kakhulu kwecala lakho futhi ngaleyo ndlela uthole okuningi kulo ...
1 Yini amaseva azinikezele?
1.1 Ukusingathwa okuzinikezele ngeseva ezinikele
1.2 Ukubaluleka kokushintshwa kwedijithali
1.3 Izinzuzo nokungalungi
1.3.1 Ngakho-ke kufanele ngiqashe iseva eyabiwe?
2 Ungayikhetha kanjani iseva ezinikele
2.1 Ukubaluleka kwe-GDPR
Yini amaseva azinikezele?
Lapho ukhetha ukusingathwa, noma ukusingathwa, lapho udinga isikhala efwini ukuze ulayishe ikhasi lewebhu / insiza, omunye wemibuzo ejwayelekile kakhulu ukwazi ukuthi yini iseva ezinikele (iseva ezinikele). Ukuba nalokhu kucacile kubalulekile ukukhetha inkampani ehamba phambili kanye nensizakalo yokubamba iwebhu, okuvumela ukuba wedwa kanye nokulawulwa okungcono kwesikhala sakho sewebhu.
Amaseva anikezelwe yi inketho ephelele kakhulu futhi ekhethekile kubantu ngabanye, ama-freelancers nezinkampani ezifuna ukusingathwa kwewebhu. Ngalesi sizathu, babe ngenye yezindlela ezifunwa kakhulu namuhla.
Ngokusobala kungabukeka kufana ne- a wabelane ngeseva, kodwa akunjalo. Kwiseva eyabiwe, iseva efanayo yabelwe amaklayenti amaningana. Ngamanye amagama, wonke lawo masayithi wamakhasimende asebenzisa izinsiza kusebenza ezifanayo zekhompyutha kukhompyutha efanayo.
Amaseva wewebhu abiwe angahle alungele amasayithi athile adlayo izinsiza ezimbalwa nokuthi zincane. Kepha uma zikhula noma zikhulu kakhulu, inketho engcono kakhulu ukuba neseva yewebhu ezinikele. Lokho wukuthi, lapho iseva noma umshini unikezelwe kuphela ku-akhawunti eyodwa, ukwazi ukujabulela zonke izinsiza.
Usebenzisa isifaniso sasemadolobheni, iseva ezinikele ingafana nokuziqashisela indlu, kuyilapho iseva eyabiwe ingafana nokuba nendlu okwabelwana ngayo.
Njengamanje, umehluko phakathi kweseva eyabiwe nezinikele usuhluziwe, ngoba, ngokubonakala kwefayela le- I-VPS (Iseva Yobumfihlo Yobumfihlo), okwenziwayo ukusebenzisa iseva efanayo kuwo wonke amaklayenti, njengamanye abiwe, kepha ngezinzuzo zalowo ozinikele ngokusingathwa kwephrojekthi ngayinye ezimele emshinini obonakalayo.
Lezi zinhlobo zezinsizakalo zivame kakhulu namuhla. Banika amandla izikhungo ezinkulu zedatha ukuthi zabelane ngezinsizakusebenza ezinkulu zemishini namakhasimende. Ukuze wonke umuntu abe neyakhe isikhala esibonakalayo ikakhulukazi, ngezinsizakusebenza zayo ze-vRAM, vCPU, isitoreji esibonakalayo, izixhumi zenethiwekhi ezibonakalayo, njll. Lokhu futhi kwenza kube nokwenzeka ukwandisa insiza nokuthola izinsizakusebenza eziningi uma kudingeka, ngaphandle kwesidingo sokushintsha iseva ebonakalayo.
Ngaphezu kwalokho, baletha enye inzuzo eyengeziwe, futhi ukuthi uma kwenzeka okuthile kwenye yaleyo VPS, ngeke kuthinte konke okunye. Lokhu kungenxa yokuthi, yize wonke amaklayenti esebenzisa umshini ofanayo womzimba (iseva), ngeVPS izinsizakusebenza zihlukanisiwe ukuthola amaseva ambalwa abonakalayo asebenza njengomshini ozimele, ngokwabiwa kwabo kwezinsizakusebenza, uhlelo olusebenzayo, isoftware, njll. .
Ukusingathwa okuzinikezele ngeseva ezinikele
Kwesinye isikhathi, amanye amakhasimende anokungabaza uma kuyefana a ukusingathwa okuzinikele kanye neseva ezinikele. Empeleni, uma unikezwa enye noma enye insizakalo, imvamisa ibhekisa entweni efanayo, isetshenziswa ngokufana.
Noma, yebo siqinile, iseva ezinikele ngumshini oxhunywe kwi-Intanethi onganikela ngohlobo oluthile lwenkonzo kumakhasimende ayo. Esikhundleni salokho, ukusingathwa kubhekisa ngqo ekusingatheni iwebhu ngaphakathi kweseva. Njengoba ngike ngaphawula phambilini, ngaphakathi kwaleyo seva kungabanjwa ama-hostings amaningi uma kwabelwana ngawo, noma uma kunikezelwa nge-VPS.
Okwamanje, ezinye izinsizakalo I-Cloud Computing Zibanzi impela, futhi zinganikela ngokusingathwa kanye namanye amasevisi: ikhompyutha, ukuhlala kusetshenziswa izinhlelo zokusebenza nezinhlelo zokusebenza, njll. (bona i-IaaS, i-SaaS, i-PaaS, ...).
Ukubaluleka kokushintshwa kwedijithali
Ngaphambi kokufika kwe- Ubhadane lweSARS-CoV-2, ukuguqulwa kwedijithali kwezinkampani kwakubaluleke kakhulu. Kepha ngemuva kweCovid-19, cishe akuseyona inketho, kepha yisibopho. Ukubeka ubuchwepheshe obusha ebhizinisini lakho kunganciphisa izindleko futhi kuthuthukise inzuzo.
Futhi esinye sezinyathelo zokuqala ukuqala lolo shintsho ebhizinisini lakho elizimele, noma ku-SME yakho, ukudala iwebhusayithi nokuyitholela indawo yokuhlala. Kunjalo nje uzoqala ukufinyelela kubo bonke labo bantu manje abangafinyeleli insizakalo noma umkhiqizo wakho. Kungenzeka ngoba zikude ngokwendawo, noma ngoba azikwazi ukuya esikhungweni sakho ngenxa yemikhawulo.
Ezinye izinzuzo kwalolu shintsho ludlula:
Ungathola okuningi idatha nezibalo mayelana namakhasimende akho angaba khona. Lokho kuzokuvumela ukuthi wazi kangcono abakudingayo, wenze izinqumo ezingcono, noma ukuthi ungalithuthukisa kanjani uhlelo lwakho lokumaketha.
Ukudijithali nakho yenza lula ukuhleleka yebhizinisi. Uzokwazi ukuphatha ibhizinisi lakho eliku-inthanethi ngobuningi bamathuluzi esoftware enza izinqubo eziningi, njengamapulatifomu e-commerce, izinhlelo zokusebenza ngokubambisana, njll.
Ukuzivumelanisa kangcono nezinguquko, sibonga iqoqo lesikhathi sangempela ledatha. Leli khono lokuphendula kusengaphambili libalulekile ngezikhathi zokungaqiniseki noma ezimeni ezinjengalesi simo esibucayi.
Ivumela ukwabiwa komsebenzi, futhi isize ngocingo.
Ngezinye izikhathi igwema ukusebenza kusuka endaweni, ngakho-ke iwebhusayithi ingakongela intela yendawo, izikweletu zikagesi, amanzi, ifenisha, njll. Lokhu futhi kunomthelela kuzintengo, okuzoba nokuncintisana okukhulu ngokungadingi ukufaka lezo zindleko emikhawulweni yenzuzo.
Ukufinyelela okukhulu yebhizinisi lakho. Ngenkathi ngaphambi kokuthi ufinyelele izakhamizi eziseduze nebhizinisi lakho kuphela, manje usungafinyelela umhlaba wonke.
Izothuthukisa isithombe senkampani yakho futhi uzoba nayo amakhasimende anelisekile kakhulu ngezinsizakalo.
Okuningi agility, ukunciphisa izinqubo zokuphatha.
Ukuba nesiphakeli esizinikezele kune- izinzuzo kanye nokubi, njenganoma iyiphi insizakalo.
Uma sisho izinzuzo, avelela:
Ukuphela: Awudingi ukwabelana ngezinsizakusebenza, umshini uzonikezelwa ngokuphelele kuwe. Lokho kunikeza ukuzimela, ukukhubazeka, nokusebenza okuphezulu.
Control: ungaphatha iseva njengoba ufisa.
Ukuphepha: Ngokungahlanganyeli izinsiza namanye amaphrojekthi, uzokwehliswa kakhulu yizinsongo ezithile.
Isondlo: Amaseva azinikezele anokugcinwa okulula, ngoba amaseva abiwe, noma i-VPS, ayinkimbinkimbi ngokwengeziwe.
Ukuvumelana nezimo: kuguquka kakhulu, ukwazi ukunikezela isikhala nezinsizakusebenza kulokho okudingayo ngempela, ngenani elikhulu lamapulatifomu nabaphathi bokuqukethwe. Ungakhetha ngisho uhlelo olusebenzayo lweseva ngenkululeko enkulu ...
Futhi uye ububi bayo:
Intengo: ukunikezelwa kubiza kakhulu kunokusingathwa okwabiwe noma amaseva we-VPS. Noma kunjalo, kufanelekile ngenxa yezinzuzo abazinikelayo.
Ubunzima: uma ulawula iseva ephelele, kufanele ube nokuqeqeshwa okwanele. Yize izinsizakalo eziningi zamafu zivame ukukwenzela imisebenzi eyisisekelo yokugcinwa nokuphathwa.
Ngakho-ke kufanele ngiqashe iseva eyabiwe?
Ngokuvamile, uma umane ufuna iwebhusayithi encane, ibhulogi, noma okufanayo nethrafikhi encane, awunaso isidingo sokwenza kanjalo qasha iseva ezinikele. Ngakolunye uhlangothi, amaseva azinikele ayindlela engcono kakhulu yamawebhusayithi ezinsizakalo, izitolo eziku-inthanethi, namanye amapulatifomu anamandla amakhulu (ivolumu ephezulu, inani eliphezulu lokuvakashelwa noma ithrafikhi yedatha ephezulu,…).
Kuyafaneleka futhi kulawo maphrojekthi angaqala amancane, kepha abe isibikezelo sokukhula kakhulu. Lokhu ngeke kudale izingqinamba zezinsizakusebenza zesikhathi eside.
Ungayikhetha kanjani iseva ezinikele
Iseva ayilutho olunye ngaphandle kwe- ikhompyutha ephezulu. Ngakho-ke, lapho uzokhetha amaseva azinikele, kufanele ubheke izici ezifanayo zobuchwepheshe njengalapho uthenga i-PC:
CPU- Amaseva ngokuvamile anama-microprocessors amaningi, okungukuthi, ubuchopho obukhulu obukhulu. Ukusebenza kuzoncika kubo lapho kuqhutshwa uhlelo olusebenzayo kanye nesoftware ephethwe kuseva. Ngakho-ke, kubalulekile ukuthi benze kahle. Endabeni ye-VPS, kuzoba i-vCPU, okungukuthi, i-CPU ebonakalayo.
Imemori ye-RAM: imemori enkulu ibalulekile, nobuchule lapho konke kuhamba khona nakho kuzoya ngakho. Ngememori ehamba kancane, ukubambezeleka okuphezulu, noma umthamo ophansi, i-CPU ngeke ikwazi ukwenza izimangaliso. Inani elidingekayo lizoxhomeka kakhulu esimweni ngasinye, ngoba akuwona wonke amaklayenti adinga into efanayo.
Isitoreji: i-hard drive ingenye ingxenye ebalulekile. Amanye amaseva azinikele asasebenzisa ama-hard hard drive (ama-HDD), azohamba kancane, kepha imvamisa anamandla aphezulu. Abanye baqale ukusebenzisa ama-hard hard state (SSDs), anejubane eliphakeme kakhulu. Ngokuvamile, akudingeki ukhathazeke ngokuthembeka kunoma yikuphi, ngoba basebenzisa izinhlelo ze-RAID. Lezi zinhlelo ezingafuneki zisho ukuthi uma idiski yehluleka, ingashintshwa ngaphandle kokulahleka kwedatha.
Isistimu yokusebenza: kungaba yiWindows Server, noma ukusatshalaliswa okuthile kwe-GNU / Linux. Ezimweni ezingavamile ungagijimela nakwezinye izinhlelo ezifana ne-UNIX, njengeSolaris, * BSD, njll. Ngenxa yokuqina kwayo, ukuphepha, nokusimama kwayo, iLinux iye yanqoba kwabaningi, ngaphezu kokuba nezidingo zokugcina eziphansi nezokuphatha.
Ukudluliswa kwedatha- Kushiwo ivolumu yedatha engadluliselwa ngaphezulu kwemigqa yokuxhumana yalawa maseva. Kuyinto abahlinzeki abajwayele ukuyikhawulela kwezinye izinsizakalo, noma abanamkhawulo kwezinye ezibiza kakhulu. Kunoma ikuphi, kufanele ilungiswe kulokho okudingayo ngokuvakashelwa noma ukudluliselwa ozokwenza.
Eminye imibuzo engakuthakazelisa ukuthi uwuhlobo lwephaneli yokulawula enayo, noma ezinye izinsiza ezingakunikeza, ezinjengokubhaliswa kwesizinda, izinsizakalo ze-imeyili, imininingwane yolwazi, njll.
Uzwile neze I-GAIA-X, iphrojekthi yaseYurophu ethokozisayo yesikhulumi samafu esihlangabezana nezidingo ze- Umthetho waseYurophu wokuvikela idatha. Okuthile okubalulekile ukuhlonipha ilungelo lobumfihlo nokugcina imininingwane endaweni yase-Europe (noma ukwehluleka lokho, ukuthi bayayithobela I-GDPR).
Uma lokhu kubalulekile kubantu ngabanye, kubaluleke nakakhulu lapho usingatha idatha ebucayi enkampanini, noma kumakhasimende ayo. Inkinga ukuthi ukuthola izinsizakalo ezihambisana nale mithetho futhi ezinokuncintisana kunzima. Noma kubhekwa kakhulu ithonya namandla amakhulu okuthiwa abizwa ngeGAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, neMicrosoft).
Thola amaseva azinikele abanjwe ku- izikhungo zedatha ngaphakathi kweYurophu, futhi ukuncintisana akulula. Isibonelo kungaba u-Ikoula., Uchwepheshe ekusingatheni iwebhu, amaseva azinikezele, kanye nekhompyutha yamafu. Ngaphezu kwalokho, banolwazi oluningi kusukela ngo-1998.
Izikhungo zakho zedatha baseFrance, ezindaweni ezimbili eReims nase-Eppes, kanye naseHolland naseJalimane (futhi nase-USA naseSingapore, kepha ungakhetha uma unezintandokazi). Izikhungo ezingabanikazi, hhayi eziqashiwe njengoba kwenzeka kwezinye izinsiza. Ngaphezu kwalokho, inezinkampani ezingaphansi kwayo eNetherlands naseSpain. Ngaphezu kwalokho, banenkonzo enhle yosizo yezilimi eziningi engu-24/7 onawo.
phakathi Izinsizakalo ze-Ikoula phuma:
meyili professional kanye izizinda zewebhu okwakho
Izitifiketi ze-SSL / TLS ukuphepha
Izindlela zokuxhumana ezilula ukuphathwa
Ngaphandle kwalokho, uzoyithanda ukuthola ezinye izimfanelo like:
Sebenzisa umthombo ovulekile namaphrojekthi wamahhala njengamaKubernetes.
Ser ukuphendula eco, ukuhlonipha kakhulu imvelo ngokusebenzisa amandla avuselelekayo ayi-100% ezikhungweni zabo zedatha (khumbula ukuthi izikhungo zedatha zisebenzisa amandla amakhulu, futhi lokhu kubalulekile).
Basekela ukuqala-up, okungaba kukhuthaza okuhle uma usaqala.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okunye » Amaseva azinikezele: ungayikhetha kanjani efanele icala lakho elithile
I-CrowdSec: iphrojekthi yokusebenzisana yokuphepha komthombo ovulekile weLinux